Maitiro ekudhawunirodha zvikumbiro kubva kuApp Store pane iyo iPhone X | IPhone nhau
louis padilla | | iPhone X, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kuuya kweIOS 11 uye iyo iPhone X kwareva shanduko huru mune aesthetics uye kushanda kweApp Store. Iyo Apple iOS App Store yakawana padyo-yakazara kugadziriswazve uko kwenyaya dzekuvandudza pamwe nekurudziro yeapps izvozvi zviri zvepamusoro. Asi ne iPhone X zvakare nzira yatino dhawunirodha kunyorera yashanduka.
Kushaikwa kwebhatani repamba uye neyakagunzvana Touch ID sensor zvinoreva kuti ikozvino kuzvizivisa isu tinofanira kushandisa kumeso kwechiso cheiyo X X. Iyo inonzi Chiso ID iyo inogara ichishanda ndiyo mukutarisira kuziva kumeso kwedu uye nekudaro enderera pakutenga kwesapplication yatakumbira kurodha pasi. Asi isu tinosimbisa sei kutenga kuti tirege kurodha pasi zvisingadiwe?
Kusvika parizvino, sekureba sekuti iPhone yedu yaive neTouch ID, patakadhirowa chikumbiro kekutanga isu taifanira kusimbisa kuzivikanwa kwedu uye chinangwa chedu chekuita nekuisa munwe pane iyo chigunwe chekunzwa iyo inosanganiswa pazasi pebhatani repamba. Nenzira iyi, iyo iPhone yakaziva kuti yaive isu ndokuenderera nekutenga nekurodha pasina kuisa password account yedu. Asi ne iPhone X hapana bhatani repamba, saka kumeso kumeso ndiko kune mutariri wekutiziva isu, chimwe chinhu chinoitika otomatiki nekungotarisa pachiratidziri, zvinoitika kana tichirodha pasi application.
Maitiro ekudzivirira akakanganisa mabhatani anokonzeresa kurodha pasi kwekushandisa? Apple yakawedzera nhanho iyo kusvika parizvino yanga isipo pane chero eanogadzira: tinya bhatani rerutivi kaviri. Ichi chiito chakareruka chinoita kuti system izive kuti isu tinonyatsoda kutenga kunyorera uye kuti haisi mhosho, uye kurodha pasi kunotanga otomatiki. Apple ingadai yakasarudza bhatani rakatarisa pachiratidziri, asi ikasarudza bhatani repanyama kuita kutenga. Izvo zvinoenda mukutenga kwe-mu-app.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekurodha pasi kunyorera neiyo iPhone X
Fuck Luis haisi yekuda kushoropodza, asi zvinyorwa zvako zvinogara zvichitevedza iri danho, riise nekuti richava nani kune wese munhu.
Ukazviita kuzadza pamagumo ndinomira kushanyira webhu
Havasi vese vaverengi vane rombo rakaringana kuve neruzivo rwemberi, senge iwe zvaunoratidzika kunge unayo. Chinyorwa ichi chinopindura kuchokwadi chekuti kumwe kutsvagirwa kwakakurumbira mugoogle chaiko kunyatso dhawunirodha maapplication pane iyo iPhone X. Tinofanira kunyora zvinyorwa zvemunhu wese, zviri nyore sekusaverenga izvo zvisingakufarire.
Izvo hazvisi zvekushoropodza, asi kana ako ese makomendi nguva dzose achiteera iri nhanho, riise nekuti richava rakanaka kune wese munhu. Nekuti nezuro nezve Tlegram X yaivewo yechinyorwa, pamusoro pekuratidza kusava neruzivo nezve app.
Kana iwe usingade iyo blog, iwe unokokwa chose kuti usapinde zvakare, zviri mahara.
Kana iyo dzidziso yekukwiridzira vhoriyamu pane iPhone X?
Ndo zvandisiri kuzo pindazve, maita basa nekukoka kwenyu
OMG, chidimbu chedzidziso hahahahahahaha
Ivo Kirasi yakashata inoshoropodza nguva yese yeruzivo iyo kune vanhu vasingazive kana ichigona kuvabatsira, kune mhando dzevanhu vanotsoropodza nekuti uye nei vasingadaro, kana vasingafarire, havango verenga
Aldof Gall akadaro
Zvakanaka, chinyorwa chakandibatsira zvakanyanya. Ini ndanga ndoda kufonera apple kuti nditsanangure zvekutenga. Ini ndinoramba ndichishanyira yako yakanaka webhusaiti. Ndatenda
Pindura kuna Aldof Gall
Kwandiri zvakare inyaya yandaitoziva kuita, ndaisazvida, asi ndinonzwisisa kuti kune vakawanda kana ikashanda, dzimwe nguva haishande iwe nedzimwe nguva, ndinonzwisisawo kuti kunyora zvinyorwa hazvisi sezviri nyore sezvose zvaunazvo Kuisa chinhu chitsva kune wese munhu uye kune rimwe divi kune avo vane imwe nhamo neApple, zvirokwazvo chimwe chinhu chakaitika kwavari vachiri vadiki uye vanoenda kuforamu ye iPhone kunotsoropodza, ipapo ivo vanokwira uye vanogunun'una nekuti vakapindurwa zvisirizvo, handidi kuenda kune imwe yeSamsung kuti ndibatanidzwe nharembozha kana iyo mhando, kunze kwekuti inhare huru, munhu wese ane zvavanofarira uye izvo zvakanaka kuti zvakafanana izvo, asi avo vandiri kureva ndevaya vane nharembozha yeadafsadfa brand uye vakamirira kuti chimwe chinhu chibude muApple kushoropodza, kwandiri vane dambudziko kubva paudiki rinovatungamira kune izvo, ndinofunga hazvifanirwe uchifungidzirwa uye nekuwedzera panguva ino, haufanire kusvika panguva dzakaipa pasina, kana uchiona zita rekuisa …… ..unozviziva nekuti unoenda woenda kune zvimwe zvinyorwa. Kwazisai uye rinogona gore rinotevera kuve rimwe remakanakira kune wese munhu.
Apple inoshandira vatatu vatungamiriri veAmazon yeiyo vhidhiyo chikuva